TJ Watt Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Davante Adams Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Odell Beckham Jr Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Travis Kelce Childhood Nhau Plus Untold Biography chokwadi
musha Africa Osagie Ize-Iyamu Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Yedu Osagie Ize-Iyamu Biography inoratidza Chokwadi pamusoro penyaya yake yehucheche, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Hupenyu Hwemhuri, Mudzimai, Vana, Hupenyu hweMunhu, Net yakakosha uye Chitendero. Iko kutsvagisa kwakazara kwezviitiko zvinozivikanwa zvine chekuita neMazuva Ekutanga chaipo kusvika mukurumbira wake.
Ehe, anozivikanwa saNigerian Mufundisi, Wezvematongerwo enyika, wezvekurima, aimbova Chief of Staff uye Secretary kuhurumende yeEdo State muNigeria.
Iye zvakare ari nhengo yeAll Progressives Congress (APC). Gara nepatinenge tichizarurira uye tichikupfumisa nenhoroondo yeupenyu inonakidza yaOsagie Ize-Iyamu.
Osagie Ize-Iyamu Nyaya yehucheche:
Kutanga, Mufundisi weNigerian akazvarwa musi wa21 Chikumi 1962 kuna baba vake, Gavhuna Mukuru Robert Osayande Ize-Iyamu, naamai vake, Mai Magdalene Naghado Ize- Iyamu (née Obasohan), zvakare wekurangarira ndangariro.
Mazita ake akazara ndiOsagie Andrew Ize-Iyamu. Ivo baba kune vezvematongerwo enyika, vasati vafa
aive Esogban weGreat Benin Kingdom apo Amai vake vaive bhizinesi rakatanhamara
Asati akura, anofanira kunge aive neruzivo rwehudiki achifarira kuzvarwa mumhuri yehumambo. Uye nekudaro achikura muguta rekurasa ndarira reBenin, aive neshungu dzekushushikana maererano nezvinodiwa nemhuri zvekugara, chikafu, uye hutano.
Bam Adebayo Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
Osagie Ize-Iyamu Mhuri Mhuri:
Its a Normal kunyanya muBenin City kuti maRoyals ave mukuremekedzwa kukuru. Mhuri yaOsagie yepamusoro-yepakati-mhuri haina kusiiwa kunze. Vakanga vari mhuri inoremekedzwa, yakadzika midzi mukuremekedzwa uye ine mbiri yakatanhamara yebasa kunharaunda yavo nenzanga.
Osagie Ize-Iyamu Mhuri Dzinobva:
Kuziva nhoroondo yemadzitateguru edu kunotibatsira kuwana nzwisiso huru yematambudziko apfuura, uye zvakare kutipa ruzivo rwekurarama hupenyu huri nani. Pasina kumwe kunonoka, ngatione izvo zvakatangira Osagie.
Ize-Iyamu anobva kuIguododo, muOrhionmwon Local Government Area yeEdo State. Iye wedzinza remhuri inoyevedza. Tateguru vake, Chief Odia aive Iyase 'N'ohenmwen (Mutungamiriri) weBenin mukutonga kwaOba Osemwende (1816 - 1848 AD).
Mepu inoratidza yaPst Osagie Yemhuri Yemhuri muEdo State.
Osagie Ize-Iyamu's madzimai emidzi zvakare ane mukurumbira mukurumbira. Sekuru vake baba vababa vaive Obasohan anozivikanwa weAkpakpava, anobva kuErua yeIgieduma Ward, Uhunmwonde Local Government Area.
Osagie Ize-Iyamu Dzidzo:
Iye murimi anozivikanwa kuve nemitambo mikuru mukudzidzisa kwake. Ize- Iyamu aive nedzidzo yake yepuraimari kuSt Joseph Primary School neEbenezer Nursery uye Primary School, vese vari muBenin City.
Mufananidzo unoratidza Bheji rechikoro cheIze-Iyamu rakapinda.
Nguva pfupi yapfuura, aive nedzidzo yake ye Sekondari kune yekutanga sekondari muEdo State mu1979, inonzi Edo College. Akawana mhedzisiro yepamusoro mukirasi yehunyanzvi muWest Africa Chitupa Bvunzo.
Paakawana mukana kuYunivhesiti yeBenin muna 1980, akadzidza Sainzi Yezvematongerwo enyika
asi akazochinja kosi yake yekudzidza Mutemo chinotevera chikamu chedzidzo. Aive chikamu chemapiyona muCustoms of Law, University of Benin.
Aaron Donald Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Akapedza kudzidza neLLB (Hons) muna 1985/1986 ndokuenda kuNigeria Law School uko kwaakatakura Bachelor of Law (BL) ndokudaidzwa kuNigerian Bar mushure.
Osagie Ize-Iyamu Basa Kuvaka-up:
Munharaunda yedu yazvino, Kudzidza Zvematongerwo enyika Sayenzi haisiyo nzira yekupinda mune zvematongerwo enyika. Nekudaro, kuswedera padyo kwaOsagie kune nyaya uye zvematongerwo enyika munharaunda baba vake vaibatanidzwa mazviri, zvakamupa kufarira kukuru.
Kuda uku kwaizomutungamira kurota kwekuita mukurumbira mumitambo yezvematongerwo enyika yeHurumende yeKwakabva.
Osagie Ize-Iyamu Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Nhengo dzinoshamisira dzeMubatanidzwa Wevadzidzi vachiri muYunivhesiti inoenderera mberi kuenda kune chikamu chezvematongerwo enyika. Nyaya yaPastor Osagie Ize-Iyamu yanga isina kusiyana. Akashanda zvakanyanya kusarudzo kwemapurezidhendi akati wandei nenhengo dzeMubatanidzwa dzeVadzidzi Union vachiri muUniversity yeBenin.
Chiitiko chake chaizoratidza chakakosha kuchirongwa chakatungamira kusarudzo ye Dr Lucky Nosakhare Igbinedion, saiye sachigaro weOredo Local Government Council, muBenin City, muna 1983, pasi pezero bato system.
Osagie Ize-Iyamu Bio - Simuka Mukurumbira:
Nekuda kwekuti basa rake raitwa zvakanaka, akazova Mutungamiriri weVashandi, Edo Statehouse, iri pasi pehutungamiriri hwaDr Lucky Nosakhare Igbinedion, iye Executive iyeye Gavhuna weEdo State muna 1999.
Panguva iyo yaakasimudzira hofisi kune chinodakadza chinzvimbo chinonyungudika chekubvunza, zano uye kuvaka chivimbo.
Murume azere nerudo kuvanhu vake.
SaMukuru weVashandi, kubva muna 1999 kusvika muna 2003, Akavimbisa hukama hwakadzikama uye hwakadzikama nevapenji uye vatungamiriri vevashandi muEdo State.
Michael Phelps Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
Mukucherechedza basa rake rakanaka saMukuru weVashandi, Osagie Ize-Iyamu akakura kune chinzvimbo cheMunyori weHurumende yeHurumende (SSG) kwaakaratidza kuve akavimbika, akavimbika, akavimbika, uye mumiriri akanaka erudzi akazvipira kugara zvakanaka kwevanhu veEdo.
Osagie Ize-Iyamu's Zvematongerwo enyika Basa:
Semhedzisiro yehungwaru uye kugona kwake kugona, Mufundisi akabata zvinzvimbo zvakakomba mune zvematongerwo enyika. Ave ari, National Vachigaro-Sachigaro neSouth-Maodzanyemba Zone yeiyo isina basa Action Congress yeNigeria (ACN).
Osagie aive zvakare Murongi weGoodluck / Sambo Campaign Organisation muna 2011. Uye zvakare Director-General weGavhuna Adams Oshiomhole Re-sarudzo Campaign Organisation. Muna 2012, vakave nhengo, APC Constitution Drafting Committee.
Pane yese mabasa aya, akapa mabasa ake zvakanaka. Akagamuchira rukudzo doctorate kuBenson Idahosa University musi wa1 Chikunguru 2019 muHurumende hutongi.
Pastor Osagie Ize-Iyamu, vaive mumiriri wePeople's Democratic Party (PDP) mu 2016 gubernatorial sarudzo muEdo State.
Ize-Iyamu Edo Nyika Gubernatorial Photo.
Asi parizvino anonzi ndiye anokunda yemagavhuna ekutanga eAll Progressives Congress (APC) pasi pe Mutungamiri Muhammadu Buhari manejimendi. Sarudzo dzakatemerwa Nyamavhuvhu 2020 mudunhu reEdo.
Mutungamiri Buhari vanotsigira Ize-Iyamu's Gubernatorial Race.
Osagie Ize-Iyamu Wawakaroorana naye:
Kubudirira kwemurume, vanoti zvine chekuita nemhando yemukadzi waanosarudza kuva naye muhupenyu hwake. Ize-Iyamu anofara akaroora kuna prof. Idia Ize-Iyamu, Consultant Orthodontist ane University of Benin Teaching Hospital uye Purofesa paUniversity yeBenin. Iye, zvakadaro, saOsagie zvakare Mufundisi.
Pst Osagie mumufananidzo nemukadzi wake anonakidza, Prof (Mai) Ize-Iyamu.
Osagie Ize-Iyamu Hupenyu Hwemhuri:
Pamberi pekufa kwevabereki vake veRoyal uye muchato nemukadzi wake, aimbova Chief of Staff aive nerutsigiro ruzere kubva kuvabereki vake.
Rutsigiro rwemhuri urwu rwakabatsira kuumba pfungwa yake yezvematongerwo enyika uye nhoroondo yakanaka Zvino ngatitarise kuna baba vake, amai, vanun'una, pamwe nehukama hwake futi.
Vabereki vaOsagie Ize-Iyamu:
Pamusoro pazvose, akaverengerwa wechipiri mukutungamira kusvika pakufa kwake, saEsogban weBenin baba vezvematongerwo enyika vakangwara vaive mukuru anoremekedzwa weOba yekuBenin. Amai vaOsagie vaive mudzidzisi akadzidziswa uyo akazozviratidza semutengesi akabudirira.
Zvimwe Zvakawanda Nezve Osagie Ize-Iyamu Vana:
Kunze kwekuve nehupenyu hutsva hwemagariro, kuve nevana kunopa iwe nemumwe wako chimwe chinhu chekutaura nezvacho, kusanganisira zviitiko zvisingakanganwike. Kuroora kwaPastor Osagie kune vana (4) vana.
Zvimwe Pamusoro paOsagie Ize-Iyamu's Siblings:
Kunyangwe hazvo tisina zvakawanda zvatinoziva nezvehama dzemufundisi, zviri pachena kuti aive nemukoma mukuru, Osato Ize-Iyamu. Akavhiringidzwa nepamusoro-soro maitiro ekudzidzira, wechiduku Osagie akamboda kutora tsoka dzemukoma wake mukuru uyo ​​akaenda kunze kwenyika kunopfuurira kudzidza.
Osato Ize-Iyamu akawana BBA, Accounting kuLeMoyne-Owen College, Memphis Tenn, USA. Iye aive iye akasarudzika chipangamazano kuEdo State Hurumende inotungamirwa naKomuredhi Oshiomhole pane zvekutengeserana nemaindasitiri. Izvo zvakadaro zvinosuruvarisa kuti akarasikirwa nehupenyu hwake mu2013.
Osato, asati afa, aive murume akazvipira kuna Ifueko, baba vane mutsa, muKaturike akazvipira, uye murume akanaka. Rubatsiro mukugona, murunyararo uye anovaka zambuko. Mukadzi wake Gweta, Mutevedzeri Wachigaro, AFBA-NIGERIA FORUM, Nhengo CIArb (UK) Nigeria Bazi uye Nhengo, NBA & FIDA.
Amanda Seyfried Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Zvimwe Pamusoro paOsagie Ize-Iyamu Relatives:
Aimbove Mubatanidzwa we Ibrahim Babangida, Prof. Omo Omoruyi aive mukoma wemukuru wezvekurima. Iye, zvinosuwisa, akazofa mushure mekurwa nekenza kwemakore akawanda kudaro muna 2013. Mushakabvu Professor Omo Omoruyi vaivewo nemunin'ina wavo; Mr. Sunny Omoruyi.
Vanozopera Prof. Omo Omoruyi, mumwe wehama dzaIze-Iyamu.
Zvakare zvakakodzera kucherechedzwa ndeyekuti anononoka Pa Obasohan, sekuru vaamai vaOsagie Ize-Iyamu, uye amai veMambo Wake, Oba Erediauwa vaive hama dzekutanga.
Osagie Ize-Iyamu Hupenyu hweMunhu:
Sezvinotsanangurwa nevanhu vanomuziva iye pachezvake, anodzikiswa zvakanyanya. Osagie akavhurika kune akanaka mazano, anokurudzira chirongwa chaicho, uye ane hunhu hwemagariro. Ndiye chibvumirano chetariro yevaKristu, kunyanya muHurumende. Ize-Iyamu zvakare mutungamiriri wehutongi hwevanhu uye kururamisira.
Nyanzvi Yezvematongerwo enyika.
Tsoka dzaOsagie Ize-Iyamu mune zvematongerwo enyika uye muhofisi yeruzhinji muEdo State yakave inoshamisa mukudzika, kukura uye kusimba kwayo Iye anodzika-kufunga wezvematongerwo enyika ane hushingi dhizaini inokurudzira tariro yehutongi hwakanaka uye rusununguko rwegutsaruzhinji.
Osagie Ize-Iyamu Mararamiro:
Akapfuma Sei Osagie Ize-Iyamu? Isu parizvino hatina ruzivo rwakakwana nezve ake Cars, Mwedzi / Mwedzi Wegore Mari nezvimwe.
Kunyangwe wezvematongerwo enyika akaberekerwa muEdo parizvino asina chinzvimbo mune zvematongerwo enyika. Yake, Zvakadaro chikuru sosi yemari inoramba iri yake Farm. Osagie muhoro wepagore une mari inofungidzirwa kuti inokwana $ 4million kubva muna 2019.
Ipurazi remombe raPastor Osagie.
Osagie Ize-Iyamu Chokwadi:
Mukutenderedza nyaya yedu yehucheche uye chinyorwa cheBiography, tinopa chidimbu cheruzivo iwe chaungave wanga usingazive maererano neNigerian Politician uye Mufundisi. Pasina kuzeza, ngatitangei kuenda.
Chokwadi #1 - Nhoroondo Zvinyorwa
Mhuri yeIze-Iyamu ine zvinyorwa zvechivakwa uye ine muridzi wekutanga unonzi "Egedege N'Okaro" munzvimbo yese yeMid-Western Region, Nigeria inova iyo yanhasi Delta neEdo States. Chimiro chakavakwa muna 1906 nasekuru vaOsagie sekuru Maremu Chief Iyamu, iyo Inneh yeBenin Kingdom.
Chokwadi #2 - Murimi
Sezvo aine chinangwa chekuvaka bhizinesi nemhando dzakasiyana, akatanga IO Ventures Ltd mu1996, achitaura nezvayo ave Sachigaro / CEO kusvikira zvino. Iyo Training Institute ndiyo yemhando yekugara purazi kuUgbor, Amagba nharaunda muBenin City, Edo State.
Mufananidzo weIO Farms Training Institute.
Kugara kwemapurazi kune chinangwa chekudzidzisa zvekurima, kupa vechidiki simba uye kuwana hunyanzvi; mhinduro kwayo yekudzikisira kushomeka kwevechidiki, kuzorora uye mhosva dzakarongeka.
Chokwadi #3 - Anenge Akarasika Hupenyu Hwake
Kutyaira parwendo kubva kuBenin, ichisvika kuShagamu, mota yake yakanga yatadza kudzora. Pane tsaona inouraya yakamusiya asingaoni, akaremara uye asina chaanoziva.
Sekureva kwaOsagie, Maawa mapfumbamwe pakati pekuziva kwake, akanyengetera uye akapika kuti achashandira Mwari kana akapona. Munyengetero iwoyo wakapindurwa here? Ndinofungidzira iwe unoziva mhinduro.
Nyanzvi yekurima nemurume wake vari muchechi vanoshanda. 📷: cyboknews
Tsaona yaive chiitiko chakakonzera Osagie kupinda mukuzvipira uye moyo wakagara kuzvipira kuna Mwari uye Nharaunda yechiKristu.
Chokwadi #4 - Chitendero chaOsagie Ize-Iyamu
Basa rake uye kushingairira pakutenda kwake hazviperi. Nhasi, kungofanana neNhamba yechipiri (2) mugari muNigeria, Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika Yemi Osibanjo; Osagie Ize-Iyamu muKristu uye zvakare Mufundisi. Iye ndiye Mufundisi weRuwa anotarisira Zonal, Area uye maparishi eiyo Yakanunurwa Chechi yeChrist of God (RCCG) muEdo State.
Ben Affleck Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Pasi pehutungamiriri hwake, chivakwa chakanakisa chakakwevera kutarisisa kweMutariri Mukuru, RCCG, Mufundisi Enoch Adeboye, yakavakwa.
Ize Iyamu anoshanda seMufundisi.
Osagie Ize-Iyamu Biography Dhata
Zita rizere: Osagie Andrew Ize-Iyamu
Nick Zita: Osagie Ize-Iyamu
Zuva rekuzvarwa: 21 yaJune 1962
Town Town: Benin Guta, Edo, Nigeria
Baba: Gare gare Chief Robert Osayande Ize-Iyamu
Amai: Maresei Mai Magdalene Naghado
Ize- Iyamu (née Obasohan)
Mumwe: Purofesa Idia Ize-Iyamu
Hanzvadzi konama: Osato Ize-Iyamu
Vana: Chechina (4)
Dzidzo: Univeristy yeBenin (LLB. Honours)
Basa: Mufundisi, Politician, Lawyer uye Agriculturist
Muhoro: Under Under Review
Net Worth: Mamiriyoni mana emadhora (4)
Isu tinofungidzira kuti izvo zvakawana zvinonakidza, tichiverenga yedu Osagie Ize-Iyamu nyaya yehucheche. Isu tinoonawo kuti akabatirira sei kuchiroto chake chekusave chero wezvematongerwo enyika asi mumwe ane mutsauko. Anowedzera kuvimbika, kushuva uye kugona mukuita basa rake. Nekudaro, hunhu uhwu hauna kungoratidza mukutenda kwake asiwo hupenyu hwake hwezvematongerwo enyika.
Ita zvakanaka kugovera ruzivo rwako nesu. Isu tinokuvimbisa iwe zvimwe zvebhayaroji chokwadi nepamusoro-notch chokwadi uye kurongeka; kunaya, uya kupenya. Gara wakabatana!
Aaron Rodgers Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi